लगानी संकटमा परेको समय हो यो
२०७७ भदौ १६ मंगलबार १४:३०:००
कोरोना भाइरको संक्रमण र त्रासबीच पनि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा गीत गाउने र सार्वजनिक हुने क्रम रोकिएको छैन । दिनहुँ गीत र म्युजिक भिडियो बजारमा आइरहेका छन् । ‘नेपाली तारा’ सिजन-२ का विजेता सन्तोष लामाको गीत ‘डर छैन’ पनि कही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको थियो । ०६४ मा ‘नेपाली तारा’को विजेता भएपछि सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय उनले त्यसयता दुई सयभन्दा धेरै गीत गाइसकेका छन् । पाश्र्व गायनमा पनि रुचाइएका सन्तोषले तीन दर्जनभन्दा धेरै चलचित्रका गीत गाइसकेका छन् । उनै सन्तोष लामासँग नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, नेपाली गीत-संगीतको आन्तरिक र बाह्‍य बजार प्रवर्द्धनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानी :
कलाकारलाई लकडाउन वा निषेधाज्ञाको प्रभाव नपरेको हो, गीत त सार्वजनिक भइरहेका छन् त ?
मेरो विचारमा नेपालमा तीन/चार खालका गायक-गायिका छन् । पहिलो अथाह पैसा भएका तर बजार व्यवस्थापनको आइडिया र प्रतिभा पनि नभएका । दोस्रो पैसा भएका र बजार व्यवस्थापनको आइडिया पनि भएका जो दुई-चार दिन मुखमा झुन्डिने गीत गाइरहेका छन् । अर्को लोकदोहोरीका गायक-गायिका जो तिजका गीतमा अथाह पैसा खर्च गरिरहनुभएको छ । तिजका गीतमा यति धेरै लगानी किन भइरहेको छ मलाई पनि थाहा छैन । अर्को जो गाएर बाँच्छु भन्ने गायक-गायिका उहाँहरूका गीत कोरोनाको महामारीमा त्यति धेरै आएजस्तो लाग्दैन । यदि आएका छन् भने गीतकार, संगीतकार वा प्रोड्युसरले लगानी गर्नुभएको छ । गायक स्वयंमले लगानी गरिरहनु भएको छैन । अघिल्ला तीन प्रकारका गीत आइरहेका छन् ।
अडियो मात्रै होइन भिडियो पनि बनिरहेका छन् । किन संक्रमणको जोखिम मोलिरहेका छन् कलाकार ?
मेरो हकमा कुरा गर्दा चैतयता मैले गरेको गीत यो मात्रै हो । मैले भिडियो बनाउने समयमा संक्रमण पनि निकै कम थियो र लकडाउन पनि थिएन । भिडियो खिच्दा पनि हामीले निकै धेरै सचेत भएर क्रु मेम्बर पनि निकै कम राखेर खिचेका थियौं ।
कोरस पनि धेरै राखेर बिग बजेटमा भिडियो बनाइरहनु भएको पनि छ । त्यो त रिक्स नै हो । संक्रमण र लगानी दुवैका हिसाबले रिक्स छ । मैले बुझेअनुसार अहिले युट्युबबाट आउने रेभिन्यु पनि राम्रो छैन । लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानी फिर्ता हुने सम्भावना पनि कम छ । यस्तो अवस्थामा किन लगानी गरिरहनुभएको छ, म पनि अचम्ममा छु ।
प्रशासनको आँखा छलेर वा दूरी कायम गरेर जबरजस्ती आउने गीत कत्तिको गुणस्तरीय होलान् ?
यस्तो त्रासमा सम्झौता त गर्नुपर्छ । यो कुरा बाहिर आएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन तर सुटिङकै क्रममा मेरो एउटा साथीलाई कारोना संक्रमण भयो । संक्रमणको ठूलो जोखिम त छँदै छ, कन्टेन्टका हिसाबले पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसैले यसबारे गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ । आर्थिक रुपमा पनि र संक्रमणका हिसाबले पनि ठूलो संकटमा छौं त्यसैले अहिले गर्ने लगानी कोरोनाको महामारी पछि गर्दा राम्रो हुन्छ ।
कोरोनाका कारण सांगीतिक क्षेत्रमा कत्तिको प्रभाव परिरहेको छ ?
झट्ट हेर्दा गीतहरू आइरहेका छन् । कलाकारहरू सामाजिक सञ्जालमा चहलपहल गरिरहेका देखिन्छन् । हेर्दा राम्रै देखिन्छ तर यर्थाथमा त्यस्तो छैन । ९० प्रतिशतभन्दा धेरै गायक-गायिका, कम्पोजर, रेकर्डिस्टलाई एकदम कठिन छ । अलकति नाम भएका व्यक्तिलाई राहत माग्‍न पनि अफ्ठ्यारो हुँदोरहेछ । यस्तो समूह अहिले ठूलो छ नेपालमा ।
अभावमा रहेका सर्जकलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?
गीत-संगीतसँग सम्बन्धित धेरै संघ-संस्था छन् । संगीतकार संघ, गीतकार संघ, प्रस्तोता समाज, रोयल्टी संकलन समाज, म्युजिक कम्पनीहरूलगायत थुप्रै संघ-संस्था छन् । यी संघ-संस्थाहरूको पनि सहयोग गर्ने दायित्व हो । सुरुका महिनामा संगीतकार संघले राहत लिने व्यक्तिको नाम र तस्बिर सार्वजनिक नगरी राहत वितरण गरेको थियो । त्यसले कलाकारलाई राहत मिलेको थियो । तर अहिले ६ महिना भइसक्यो । अहिले झन् धेरै समस्या छ तर सहयोग छैन ।
हामी राज्यले सहयोग गरेन भन्छौं सधैं, तर परेका बेला सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । कलाकारलाई हामी गहना भन्छौं । चाहिएका बेला घाँटीमा सजाउने र नचाहिएका बेला निकालेर फालिदिने गर्नुहुँदैन । यो बेला सबैभन्दा धेरै असर श्रमिक, मनोरञ्जन क्षेत्र र पर्यटन उद्योगलाई परेको छ । यसतर्फ सरोकारवाला पक्षको ध्यान खिचिनुपर्छ ।
नेपाली सांगीतको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ? समयअनुसार हुँदै गएको परिमार्जनले नेपाली संगीतलाई सही दिशा दिँदै छ कि यो बाटो गलत हो ?
मेरो बुझाइमा एकदम राम्रो गीत लेख्ने गीतकार पनि छन्, राम्रो संगीत गर्ने संगीतकार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गाउन सक्ने गायक पनि छन् । यस्ता गीतहरू पनि आएका छन् ।
तर जसको गीतले नेपाली संगीतलाई अधोगतितर्फ लैजान्छ उहाँहरूसँग धेरै पैसा भएका कारण यति धेरै प्रमोसन गर्नुहुन्छ कि सर्वसाधारणलाई गायक-गायिका भनेकै यिनै हुन् र गीत भनेकै यही हो भन्ने भएको छ । यो भ्रमले गर्दा नेपाली संगीतप्रतिको आम बुझाइ नै गलत हुँदै गएको छ ।
राम्रो सर्जकलाई सञ्चारमाध्यमले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र पैसाकै भरमा आउनेहरूलाई मिडियाले पनि कम प्रोत्साहन गरेर समाचार, लेख तथा अन्तर्वार्ता आए भ्रम चिर्न सहज हुनेथियो ।
लोक, पप, रक र आधुनिक पन र शब्द मिसाएर तयार पारिएका गीत नेपालका लागि आवश्यकता हुन् कि कलाकार तथा प्रोड्युसरको फाइदा मात्रै हुन् ?
यसमा दुई पक्ष छन् । एउटा युवा पक्ष नेपाली लोकपनलाई पनि समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने मान्यताले गीत बनाइरहेको छ । अर्को पक्ष लोक भाकालाई टिपेर गीत गायो भने व्यावसायिक रुपमा सफल भइन्छ भन्‍ने छ । व्यावसायिक रुपमा सफलचाहिँ लोकभाका मिसाएर बनाइएका गीत हुन् । तर नेपाली गीत-संगीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन अहिले केही युवाले वेस्टर्न बाजागाजा र नेपाली मेलोडी अथवा नेपाली बाजागाजा तर वेस्टर्न मेलोडी फ्युजन गरेर गीत बनाइरहनुभएको । ती दुवै पक्ष ठीकै हुन्जस्तो लाग्छ ।
नेपाली लोक, पप, चलचित्र हुन् वा आधुनिक गीत सबै नेपालभित्रै सीमित रहे । हामीले हिन्दी हुन् वा इङ्लिस चलचित्रका गीत व्यग्रताका साथ सुनिरहेका बेला हाम्रो संगीतचाहिँ किन नेपालमै खुम्चियो ?
राम्रो गीत नेपालमा नबनेका होइनन् । बनिरहेका छन् । तर त्यस्ता गीतका सर्जकहरू प्रोमोसनमा त्यति धेरै लाग्नुहुन्छ । राम्रा गीत स्रोता दर्शकले खोजेर सुनिहाल्नुहुन्छ नि भन्ने मानसिकता छ । बढी प्रोमोसन किन गर्नु भन्ने सन्की मानसिकता पनि हुन्छ कति सर्जकमा । यस्ता कारणले पनि कति राम्रा गीत ओझेलमा परेका छन् ।
हामीले हाम्रो संगीतमा आफ्नोपन दिन सकेनौं कि बेच्‍न जानेनौं ?
हो, अहिले भइरहेको तथ्य कुरा हामीले गीत तयार पारेर पनि बेच्न जानेनौं । युट्युबका कारण रोजाइ अनुसारका गीत सुन्‍न पाइने भयो । चल्तीका गीतहरू नै सुन्‍ने दर्शक धेरै छन् । डिप ट्युनिङ र टेक्निकल रुपमा रिच गीतहरू सुन्ने दर्शक नै कम हुनुहुन्छ । फास्ट बिटका चटपटे गीतहरू धेरै सुन्ने गरेको पाइन्छ । गीत भनेको रमाइलो त हो नि भन्ने बुझाइ र त्यहीअनुसारका गीत धेरै आउँदा राम्रा गीतहरू बनेर पनि बेच्न नजान्दा पछि परे ।
सिङगिङ रियालिटी शोबाट आएका एकाधबाहेक प्रतिभाले गायनमा अपेक्षित कला प्रस्तुत गर्न सकेनन् भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ । तपाईं पनि सिङगिङ रियालिटी शोबाट आएको प्रतिभा, यो टिप्पणीमा सत्यता छ ?
सिङगिङ रियालिटी शोमा प्रायः नोटिस हुने टप टेन हो । उहाँहरूलाई शो मा महिनौंसम्म देखिएको हुन्छ । पछि कति सोखका हिसाबले फाट्टफुट्ट मात्रै गीत गाउनुहुन्छ कति गाइरहनु भएको हुन्छ । सबैले प्रयास गरिरहनुभएको हुन्छ । तर रियालिटी शो सकिएपछि बल्ल संघर्ष सुरु हुन्छ । आम-संगीतकर्मीले जसरी संघर्ष गर्नुपर्छ त्यसरी नै उसको पनि संघर्ष सुरु हुन्छ । संघर्षमा को अगाडि आउँछ को पछि आउँछ ठेगान हुँदैन ।
अझै पनि गायनमा लागेर एकाधबाहेकले जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक पेसा अपनाउनु परिरहेको छ । तर किन यो क्षेत्रप्रति आकर्षण पनि बढेकै छ ?
इन्टरटेन्मेन्ट क्षेत्र भनेकै ग्ल्यामरको क्षेत्र हो । वर्षौंसम्म अरबौं कमाएर बसेको मान्छेलाई पनि जनताले चिनेको हुँदैन तर एउटा राम्रो गीत गाएको गायक-गायिकालाई गाउँगाउँको मान्छेले चिन्छ । सबैले चिन्छ, टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकामा समाचार आउँछ, अन्तर्वार्ता आउँछ भन्‍ने लोभ हुन्छ । यही कारण यो क्षेत्रमा आकर्षण भएको जस्तो लाग्छ ।
गायनका विधा लोक, पप, रक, आधुनिक, चलचित्रमध्ये व्यावसायिक रुपमा सबैभन्दा सहज कुनमा छ ?
नेपालमा १५/२० जनाका हिप-हपको सर्कल छ । त्यो सर्कलले नेपाली संगीतलाई कसरी नेपाली रहेका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर विश्वका धेरै म्युजिक प्लेटर्फममा पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर र त्यसबाट आर्थिक रुपमा पनि सक्षम भइन्छ भन्‍ने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । हिप-हपको क्षेत्रमा राम्रो गर्नसक्यो भने त्यसमा पनि राम्रो छ । त्यसबाहेक लोकदोहोरी क्षेत्रका कलाकारले सहज जीवन बाँचिरहनु भएको छ । उहाँहरूको संघर्ष आफ्नो ठाउँमा होला तर देशविदेशका कार्यक्रममा उहाँहरूको माग र उपस्थिति हेर्दा सहज होला । त्यसबाहेक अरुलाई त्यति सहज छैन ।